Ny bateria Shina dia tsy nisy mpanefy Bark Collar mpamatsy sy mpanamboatra - Shenzhen TIZE Technology Co., ltd.
Home > Products > Tsy misy bark Collar > Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra
Ity manaraka ity dia mikasika ny fifandraisan'ny bateria tsy misy Bark Collar, manantena aho fa hanampy anao bebe kokoa hahafantatra ny bateria tsy misy Bark Collar.
Mpanazatran'ny alika elektronika amin'ny alàlan'ny fiarovan-tena elektronika 100%
Izahay dia manome ny mpanondrana alika elektronika amin'ny alàlan'ny rano elektronika 100% Waterproof Shock Stop Bark Control Collar.We dia mpamokatra sy mpanondrana matihanina, natsangana tamin'ny orinasa Jan.2011,2600 metatra toradroa, mpiasa 120, manana fahaiza-manao fampandrosoana sy fikarohana, nanolo-tena ho lasa avo indrindra azo itokisana. -tech orinasa amin'ny mpamatsy biby. SGS & BV nitazom-bidy ny mpamatsy an'i Sina. Vahaingo ny fenitra iraisam-pirenena CE ROHS. Izahay dia afaka manome ny mpitiavana sy ny biby fiompiny amin'ny kalitao lafo vidy sy lafo vidy, izay manarona ny fiainany, ny asa sy ny fialam-boly. Manantena izahay fa lasa mpiara-miasa maharitra aminao any Chine ianao.
Shenzhen TIZE Technology Co, ltd dia mpamatsy china mpamatsy an'ny R&D, fanamboarana sy serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra .Roa vola amin'ny fivarotam-bokatra ataonay sy manamboatra ny fonja vaovao indrindra, fancy Ny bateria tsy namboarina amboaram-bokatra, ​​hanome anao lafo vidy izahay.